Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan taariikhqorihii screen rylstim
Wixii doontid screen xirfadeed waxaa muhiim ah in aad hesho barnaamij in la hubiyo in natiijada ahbaa la tayada iyo fasalka iyo natiijada ugu wanaagsan ahbaa ka kaaftoomi badan oo aan ka dhigi lahaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in mar walba tagto ugu fiican iyo rylstim waa mid ka mid ah doontid ugu fiican screen ee jeer oo dhan. Tutorial ayaa ka go'an in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka ayaa la soo bandhigay in buuxa iyo user helo natiijada ugu wanaagsan oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Qeybtii dambe ee tutorial ayaa sidoo kale kasoo muuqan doona barnaamij in xitaa ka fiican yahay mid ka mid ah in la hoos geliyey.
Taariikhqorihii screen Rylstim, Intro ah
Top 5 talooyin ku saabsan oo taariikhqorihii ahaa screen Rylstim
Iyada oo fudud oo gobolka ka mid ah interface tahay barnaamijka uu yahay mid ka mid ah in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo farsamooyinka ugu horumarsan in dadka isticmaala oo aan arrintan wax ka dhigi lahaa. Barnaamijku waxa uu sidoo kale kasoo muuqday in la hubiyo in user helo shubay screen sameeyo hab sidoo kale waxaa uu u suuragelinayaa ah kuwa kale ee isticmaala inaad doorato barnaamijka si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka in lagu gundhig gudahood barnaamijka ee waxaa loo isticmaalaa habka ugu wanaagsan ee la sameeyo. Tutorial waxa kale oo hubin doona in user helo ugu wanaagsan ee lagu sameeyey wax waqti ah gudaha iyo natiijada ahbaa waa kan ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijka ayaa heerka sare ah ee isticmaala.
Taariikhqorihii screen Rylstim yimaado la tutorial in sidoo kale lagala soo bixi karaa website-ka rasmiga ah iyo tutorial taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay in lagu gundhig gudahood yihiin sahamiyey si weyn u kordhiyaan. Qaybta xigta ee tutorial la 5 talooyin sare oo waa in lagu dabaqo si loo hubiyo in user helo isticmaalka barnaamijka ayaa si buuxda u fahamsan yahay habka ugu wanaagsan qaban doonaan.
Ka dib waa sareysa 5 talooyin ay tahay in la mariyo si aad u hubiso in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xiriirta isticmaalka barnaamijka ee:
1. Doorashada fursadaha video ah
Goobaha barnaamijka gudahood user inay hubiyaan in fursadaha video aan la soo xulay oo keliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in pack codec iyo sidoo kale heerka jir ah ayaa sidoo kale loo doortay in ay hesho natiijooyinka ugu fiican:
2. Jidka saarka ayaa
Laga soo bilaabo suuqa kala isla user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in jidka wax soo saarka la doorto iyo intii ugu wanaagsanayd oo gobolka ka mid ah natiijada tahay ayaa ahbaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in jidka oo uu soo xushay ma aha mid adag maadaama ay aragti file sthe ka dhigi lahaa yara adag sameeyo:
3. hawlaha mouse ayaa
Hawlaha The mouse in lagu sameeyo inta lagu jiro ee kabka shaashadda sidoo kale lagu diiwaangeliyey karto iyo fursadaha ku jira xaq u heli karaa hogaanka u user si uu u hubiyo in loo shubay screen sameeyey ujeedooyinka waxbarasho ee lagu bixiyo ugu fiican in user iyo sidoo kale ugu fiican natiijada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxa kale oo ay ka dhigi lahaa hubiyo in qasabno button lagu sameeyo, waayo, jiirka ayaa sidoo kale la duubay si loo hubiyo in daawadayaasha ka helo buuxda ee waxa lagu gacangeliyey:
4. xiriir ku salaysan Internet
Bogga hantida server leeyahay oo dhan ka kooban oo la xiriira goobaha internet barnaamijka iyo this page waa la sahmin si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in goobaha internet waxaa lagu qaybiyay si waafaqsan shuruudaha loo shubay screen in la sameeyo si loo hubiyo in dhajiyay rikoorka waa u fududahay iyo gobolka of farshaxanka ah.
5. Si loo duubo bilaabi
Page fursadaha barnaamijka ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay badhan ku bilaabatay si aad u hubiso in wax lagu qoro waa la bilaabay iyo faylka la format AVI waxaa badbaadiyey Jid wax soo saarka ama goobta uu soo dejiyeen user a. Sidaas awgeed waa in mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka hawlaha farshaxanka in ay tahay in lagu sameeyo si loo hubiyo in ugu wanaagsan oo ugu horumarsan kaas oo sidoo kale waxa loo arki karaa feature ugu weyn waxaa loo sahmin iyo barnaamijka la bilaabay fudayd iyo qanacsanaanta,
Wondershare Video Convertor Ultimate waa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka in la hubiyo in user helo ugu wanaagsan oo ah qaababka ugu horumarsan in lagu gundhig gudahood si aysan u noqon adag ka dhigi lahaa. Taariikhqorihii video ayaa sidoo kale la siiyey barnaamijka oo lacag la'aan ah oo la rakibey barnaamijka ugu muhiimsan waa inuu xaqiijiyo in taariikhqorihii video ah waxaa sidoo kale lagu rakibay si toos ah. Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyadoo heerka sare ee sirdoonka iyo taageerada HD ugu dambeeyay oo 4K teknoolajiyada iyo waxa ay sidoo kale hubineysaa in goynta, qaybsama, tafatir, geeyo iyo dajinta ee videos la sameeyo qaab iyo fasalka.
Top 5 muuqaalada barnaamijka
Ka dib waxaa la kooxood ee ugu sareysa 5 muuqaalada barnaamijka in la raaco si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican iyo barnaamijka ayaa sidoo kale ku rakiban:
Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in videos ee internet-ka ka yihiin barta in ay TV-ga oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Xarunta warbaahinta A jiro si ay u taageeraan muujinta ah.
Iyadoo hal click barnaamijka kala soo bixi kartaa video kasta oo user ay u baahan tahay iyo shaqada ugu muhiimsan ee barnaamijka waxa lagu soo celiyaa in sidoo kale laga yaabaa in la sameeyo isla markiiba.
Madaxweyne Siilaanyo Oo ama taageero DLNA waxaa si aad u hubiso in qaabab lagu taageeray Madaxweyne Siilaanyo iyo qalabka la xiriira ama la mid ah ayaa sidoo kale baaraandegi fudayd.
Videos waxaa lagu muuqan gudbin karaa iyada oo aan wax taageero ah warbaahinta hanuuniyey qalab kasta ama PC. Warbaahintu waa mar kale in ay ku caawiyaan user.
Sidoo kale waxa uu warbaahinta uu soo laga keeno la shakhsi kara sida barnaamijka la feature cabsado yimaado.
Sidee inay la midowdo Video iyo Audio
> Resource > Video > Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan taariikhqorihii screen rylstim